အရွယ် 31.26 ကို MB
downloads ရယူရန္ 13 919
အတူ OK ကိုစမျးသပျ FSX acceleration + FSX-SE
Author: တော်ဝင်ပြင်သစ်ရေတပ် (RFN) ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူ RESTAURAVIA အဖွဲ့ကလုပ်ပါတယ်
အဆိုပါ Fouga Zephyr နှစ်ခု configurations လာ:
- တစ်ဦးက "တစ်ကိုယ်တော်" configuration ကို (ရှေ့ထိုင်ခုံပေါ်မှာနေရာယူထား Single-လေယာဉ်မှူး)
- ဘုတ်ပေါ်နှစ်ခုလေယာဉ်မှူးနှင့်အတူတစ်ဦးက dual-ထိန်းချုပ်မှု "DC က" configuration များ။ ဒီဗားရှင်းအထူးသ၏ "Shared cockpit" option ကိုအတူသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ် FSX.
အစစ်အမှန်လေယာဉ်နှင့်ဤမော်ဒယ်များအကြားအများအပြားကကွဲပြားခြားနားမှုက virtual လေယာဉ်မှူးများအတွက်သူ့ရဲ့အသုံးပိုမိုလွယ်ကူစေရန်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်:
- အစစ်အမှန် Fouga ဘရိတ်နှင့်အတူမြေပြင်ပေါ်တွင်စီးပဲ့ကိုင်နေစဉ်နှာခေါင်း gearwheel steerable ဖြစ်ပါသည်
- တစ်ဦး GPS စနစ်, တစ်ဦး VOR / DME တစ် TACAN နှင့်တစ်ဦးအလိုအလျှောက်လေယာဉ်မှူးနှစ်ဦးစလုံးမော်ဒယ်များမှာစတင်မိတ်ဆက်နေကြတယ်
သတိပေးချက်! ဒီဗားရှင်း2များအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါ FSXအရှိန်။ ဒါဟာလေယာဉ် Simulator 2004 (FS9) နဲ့သဟဇာတမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုကအခြားဗားရှင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ compatibility FSX(SP1 - SP2) စိတ်ချပါမပေးပါ။
ဒါဟာ (အရမ်းသိကောင်းစရာများ) ကလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသင်္ဘောပေါ်မှာဆင်းသက်ဖို့သင်မည်သို့သွန်သင်သောတယောက်အပါအဝင်ဒီအထုပ်နှင့်အတူပါဝင်သည့်လက်စွဲဖတ်ရှုဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်
ဤတွင် Amentiba အားဖြင့်တိုတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုနိဒါန်းဖြစ်ပါသည်
သူ၏ "ကြီးကျယ်သော-အစ်ကို", အ Fouga Magister လေယာဉ်အဖြစ်ကျော်ကြားဘဲ, အ Fouga Zephyr အ Fouga ၏ရေတပ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစု၏အစအဦးမှာပြင်သစ်ရေတပ်အာဏာပိုင်များက, သူတို့ရဲ့လေယာဉ်မှူးလေ့ကျင့်များအတွက်အမျိုးသားရေးလမ်းရှာဖွေခြင်း, ပြင်သစ်လေတပ်များအတွက်တိုးတက်မှုအတွက် Fouga အစီအစဉ်အားဖြင့်အလွန်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ရေတပ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်တစ်ခုအဆင်ပြေအောင် version ကိုတည်ဆောက် 1956 ဇူလိုင်လ 31 "Esquif" အမည်ရှိပထမဦးဆုံး Fouga CM170M ရှေ့ပြေးပုံစံပေါ်တွင်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ 30 လေယာဉ်၏တစ်ဦးကဝယ်ယူအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်နှင့်ပေးပို့ 1959 နှင့် 1961 အကြားလှပတဲ့ခဲ့သည်။ ဒီလေယာဉ်ပျံဗားရှင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောဝယ်ယူနိုင်ရန်လေတိုက်နှုန်း '' အမည်များကို အသုံးပြု. ဤအချိန် (Aquilon, Alize) မှာအခြားပြင်သစ်ရေတပ်၏လေယာဉ်နှင့်အညီ CM175 "Zephyr" ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုမှတပါး Fouga Zephyr အဓိကအားဖြင့် Foch နှင့် Clemenceau လေကြောင်းလိုင်းနှင့်တကွ, ပြင်သစ်ရေတပ်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပိုပြီးထက်အနှစ်သုံးဆယ်အတွင်း Zephyr ပြင်းထန်တဲ့အသုံးအခြေအနေများအောက်တွင်၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ကြံ့ခိုင်အရည်အသွေးတွေကိုပြသထားပါတယ်။
Zephyr ပျံသန်းတစ် aerobatic အဖွဲ့ကပြင်သစ်ရေတပ်အားဖြင့် 1961 အတွက်ဖန်တီးခဲ့
ထင်ရသောအလွန်အ Fouga Magister လေယာဉ်ပျံနဲ့ဆင်တူခြင်း, Zephyr သို့သော်အရေးကြီးသောအသွင်ပြောင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။